Korea Atsimo: Lehiben’ny Polisy Teo Aloha Nogadraina Fa Nanala-Baraka Ny Filoha Efa Nodimandry · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2013 13:34 GMT
Nahazo sazy an-tranomaizina 10 volana ilay lehiben'ny polisy Koreana Tatsimo teo aloha noho ny fiampangana lainga nataony tamin'ilay filoha teo aloha efa any amin'ny varo-tsy-mifody izay nolazainy fa manana kaonty miafina amin'ny banky amin'ny anarana sandoka. Tamim-pifaliana no nandraisana ny didy navoakan'ny fitsarana, saingy nitaraina ny sasany tamin'ireo mpisera aterineto fa tara loatra vao noraisina ny fanapaha-kevitra, efa marobe anefa ireo ratsy vitany.
Sariitatr'ilay lehiben'ny polisy teo aloha, Cho Hyun-oh. Sary avy amin'ny mpisera Flickr @okkokin (CC BY-ND 2.0)
Mangidy hoditra eo amin'ny liberaly sy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona i Cho Hyun-oh noho ny fanaraha-maso ataony amin'ireo olo-tsotra sy ireo tsikera [ko] ary koa noho ny famoretana feno herisetra [ko] notarihany manoloana ireo fihetsiketsehana izay namoizana ain'olona ampolony. Ao amin'izay inoana fa misy resaka ara-politika no nahatonga ny fitoriana ny filoha mamim-bahoaka teo aloha Roh Moo-hyun ho manao kolikoly, nilazan'i Roh fa manana kaonty miafina any amin'ny banky i Cho kanahatonga an'i Roh namono tena [ko].
Nilaza i Cho fa tamin'ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana no nahazoany vaovao momba ilay kaonty miafina, fanambarana izay vitany ny nanamarina izany hatramin'izao arysokajian'ny maro ho toe-draharaha tsy misy fototra [ko]. Nomelohin'ny Fitsarana ao amin'ny Distrika Afovoany ao Seoul i Cho fa manala baraka ny filoha teo aloha izay efa namoy ny ainy ary nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy tamin'ny 20 Febroary 2013 .
Tamim-piderana tanteraka no nandraisan'ny olona ny didim-pitsarana [ko], saingy sarotra ny hanonitra ny ratsy sy ny fahasimbana efa vitany :
@histopian: Cho Hyun-oh, lehiben'ny polisy teo aloha, izay nilaza fa noho ny famoahany ny fisian'ny kaonty miafina any amin'ny banky ahitana vola maloto tsy toko tsy forohana “no anton'ny namonoan'i Roh Moo-hyun (filoha-teo aloha) tena, fa niakatra fitsarana ny raharaha. Na dia izany aza, maro be ireo olona mbola mino izany fanambarany izany. Samy manana ny inoany kosa anefa ireo olona, na inona na inona marina (nivoaka vao haingana) mikasika izany.
Tsaroana ho toy ny tranga mampahonena indrindra teo amin'ny tantaran'ny Koreana vao haingana ny fahafatesan'i Roh, reformista, ka niteraka ady goavana sy fisaraham-bazana teo amin'ny vondrona ankavanana sy ireo progresista (lia-pandrosoana)
@100hyeryun: Hoy ny fanambaran'ilay mpitsara Lee Sung-ho, izay nitsara an'i Cho Hyun-ho: “nampamita-bahoaka ny fanamarihan'ny voampanga (Cho) mba hino (fa mety hisy) ‘zavatra hafahafa mandehandeha manodidina ny filoha teo aloha’ ary niteraka fisaraha-kevitra goavana teo amin'ny vahoaka mpanohana an'i Roh sy ireo mpitsikera azy izany fisalasalana izany.” Niteraka olana ny fanazavana nomeny.
Nanontany ny antony niandrasana ela tamin'ny famoahana ny didy ireo mpiserasera marobe, na dia manohana izany didy izany aza. Mampitaha izany tamin'ny fisamborana haingana tsy nisy toy izany an'i pasitera Jo [ko] izay voampanga ho nanely tsaho momba ny filoha-voafidy Park Geun-hye, hoy ity mpanao gazety @welovehani nanoratra [ko]:
@welovehani: Andro vitsy fotsiny dia voasambotra pasitera izay voampanga ho nanaparitaka tsaho momba an'i Park Geun-hye. Kanefa kosa tamin'i Cho Hyun-oh, izay voampanga ho nanely tsaho momba an'i Roh, herintaona sy sivy volana vao nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy.
Na dia maro aza ireo nandray am-pifaliana ny vaovao momba ny fisamborana an'i Cho, mpisera Twitter vistivitsy niadi-hevitra raha karazana sazy voalohany ny fisamborana olona noho ny fanalam-baraka izao :
@sungsooh: Tsy misy isalasalana fa tsy tompon'andraikitra manontolo i Cho, mpiasam-panjakana ofisialy ambony eo amin'ny governemanta, amin'ny fanaovana fanamarihana tahak'izany. Ary raha jerena ny zava-nataony avy eo mahita isika fa miharo fikasan-dratsy ny fanamarihana nataony. Taorian'ny lalàna momba ny fanasoketana/fanalam-baraka, mazava ho azy fa meloka amin'ny fiampangana azy izy, saingy tsy ekeko kosa ny sazy fampisamborana olona noho ny fanalam-baraka.
Mpisera @naticle nankatò izany ahiahy izany, saingy nanampy hoe [ko]:
@naticle: […] Na izany na tsy izany, tsy tokony nampiharina tsotra izao tamin'ny raharaha an'i Cho izany lojika izany, izay efa imbetsaka ny fanambarana (diso), kanefa sy afaka hiaro ny tenany ilay olona efa maty.